कुन तेलमा खाना पकाउने ? स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा धेरै फाइदाजनक तेल कुन हो ? « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७८, १५ फाल्गुन आईतवार ११:५४ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । तोरीको तेल, क्यानोला आयल, नरिवलको तेल, एभोकाडो आयल, मूंगफलीको तेल, जैतूनको तेल, अलसीको तेल, पामोलिनको तेल आदिको सूची धेरै लामो छ । वास्तवमा खाना पकाउने तेलको लागि धेरै विकल्पहरू छन् । तर, कुन तेल स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो ?
खाना र स्वास्थ्यको बारेमा चिन्तित व्यक्तिहरू प्रायः यो प्रश्नले अलमलमा पर्छन् ।
खाना पकाउन प्रयोग गरिने तेल प्रायः यसको फल, बोट, बीउ वा नटद्वारा निर्धारण गरिन्छ ।
तिनीहरू क्रसिङ, थिचेर वा प्रशोधन गरेर निकालिन्छन् ।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड
तेलको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यसमा धेरै बोसो हुन्छ ।
यसमा संतृप्त फ्याट, मोनोस्याचुरेटेड फ्याट र पोलीअनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिडहरू समावेश छन् ।
केही वर्षअघिसम्म नरिवलको तेललाई स्वास्थ्यको हिसाबले सबैभन्दा राम्रो मानिन्थ्यो । धेरैले यसलाई सुपरफुड पनि घोषणा गरेका छन् ।
कतिपयले यो तेल बोसोको रुपमा शरीरमा जम्मा हुने सम्भावना निकै कम भएको दाबी गरेका छन् ।
तर, हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले नरिवलको तेललाई ‘शुद्ध विष’ भनेका छन् ।
यसको कारण मानव शरीरले धेरै बोसो पचाउन सक्दैन र हाम्रो शरीरमा धेरै बोसो जम्मा हुन थाल्छ ।
जसले मुटु रोग र रक्तचाप जस्ता स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ ।
बेलायतमा सरकारको गाईडलाइनमा पुरुषले ३० ग्रामभन्दा बढी र महिलाले २० ग्रामभन्दा बढी तेल दिनमा नखान भनिएको छ ।
यसको कारण पनि बुझ्नुहोस् । तेलमा रहेको बोसो फ्याटी एसिडका कणहरू मिलेर बनेको हुन्छ ।
यी फ्याटी एसिडहरू या त एकल बन्डद्वारा जोडिएका हुन्छन्, जसलाई संतृप्त वोसो भनिन्छ ।
रगत कोलेस्ट्रोल डबल बन्डद्वारा जोडिएको हुन्छ, जसलाई असंतृप्त वसा भनिन्छ। छोटो चेनहरूमा बाँधिएका फ्याटी एसिडहरू सिधै रगतमा घुल्छन् र शरीरको ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ । तर, लामो चेन फ्याटी एसिड सीधै कलेजोमा जान्छ ।
यसले हाम्रो रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउँछ ।
नरिवलको तेलमा भएको अनुसन्धानले हाम्रो शरीरमा लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन (एलडीएल) को मात्रा बढाउँछ ।
एलडीएल हृदयघातसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको पाइएको छ ।
यद्यपि, नरिवलको तेलले उच्च घनत्व लिपोप्रोटिन (एचडीएल) पनि प्रदान गर्दछ, जसले एलडीएललाई रगतबाट बाहिर निकाल्छ ।
फैटी एसिड र भिटामिन
भर्जिनियाको जर्ज मेसन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर टेलर वालेस भन्छन्—एचडीएलमा लौरिक एसिड नामक रसायन हुन्छ, जसलाई सी १२ फ्याटी एसिड भनिन्छ । यो एक लामो चेन फ्याटी एसिड हो जुन कलेजोमा जम्मा हुन्छ । यसले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ ।
त्यसैले विज्ञहरू भन्छन्—‘स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा कम भएको तेल खानु राम्रो हुन्छ र यो पनि थोरै मात्रामा खानु पर्छ ।
पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याट र ओमेगा ३ फ्याट भएको तेल खानु राम्रो हुन्छ । यसले रगतमा कोलेस्ट्रोलको स्तर कम गर्छ र शरीरलाई आवश्यक फ्याटी एसिड र भिटामिन प्राप्त हुन्छ ।
हृदय रोगको जोखिम
पोलीअनस्याचुरेटेड र मोनोस्याचुरेटेड फ्याटयुक्त फ्याटी एसिड धेरै तेलहरूमा पाइन्छ । तिनीहरूको मात्रा बिरुवा र तेल निकाल्ने प्रक्रियामा निर्भर गर्दछ ।
जैतुनको तेलको अत्यधिक प्रयोगले मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम ५ देखि ७ प्रतिशतले कम गर्ने एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
हार्वर्ड युनिभर्सिटीको टीएच चान स्कूल अफ पब्लिक हेल्थकी वैज्ञानिक मार्टा गोस फेरेले २४ वर्षसम्म १ लाख मानिसमा अध्ययन गरेकी थिइन् ।
जैतुनको तेलको फाइदाको मुख्य कारण यसमा पाइने मोनोस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड हो ।
बिरुवामा पाइने भिटामिन, खनिज, पोलिफेनोल र अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वहरू समावेश गर्दछ ।
मार्टा भन्छिन् कि जैतुनको तेल प्रयोग गर्दा हाम्रो खानासँग सम्बन्धित अन्य हानिकारक फ्याटी एसिडहरू पनि हट्छ ।
जैतुनको तेल पल्पबाट निकालिन्छ जैतुनको टुक्रा पारेर । यो सबैभन्दा स्वस्थ तेल हो भनिन्छ जुन हाम्रो पेटमा पाइने ब्याक्टेरियाका लागि पनि राम्रो हुन्छ । यसले मुटु रोगलाई कम गर्छ भनिन्छ ।
जैतुनको तेल खाँदा क्यान्सर र मधुमेहबाट बच्ने दाबी पनि गरिन्छ ।
भूमध्य आहारको एक अभिन्न भाग
स्पेनको भ्यालेन्सिया विश्वविद्यालयका प्रोफेसर फ्रान्सिस्को बार्बा भन्छन्—‘जैतुनको तेलमा पाइने फ्याटी एसिड र अन्य तत्वले हामीलाई नसर्ने रोगबाट पनि बचाउँछ । किनभने यसमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्वहरू हुन्छन् ।
भूमध्य सागर वरपर बस्ने मानिसहरूले जैतुनको तेल धेरै प्रयोग गर्छन् । यो भूमध्य आहारको एक अभिन्न भाग हो भनिन्छ र भूमध्य आहार संसारको सबैभन्दा स्वस्थ आहार मानिन्छ । केही वैज्ञानिकहरूले यो आहार स्वस्थ हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण जैतुनको तेल हो भन्ने विश्वास गर्छन् ।
तर, मार्टा भन्छिन्—‘भूमध्य सागर वरपरको आहारमा संसारका अन्य भागहरूमा भन्दा धेरै नट, फलफूल र तरकारीहरू छन् ।’
त्यसो भए, भूमध्य आहार स्वास्थ्य मापदण्डहरूमा राम्रो साबित हुनुको कारण जैतूनको तेल मात्र होइन, तर सम्पूर्ण आहार हो । तेल कम मात्रामा खानु राम्रो हो
अन्वेषकहरूले पत्ता लगाएका छन् कि अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा खाना खाँदा रगतमा ग्लुकोजको स्तर कम हुन्छ।
कतिपयले एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ आयल सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक रहेको दाबी गर्छन् ।
तर, यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटामिन ईको मात्रा बढी भए पनि स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । तर, यो धेरै कम तापक्रममा तात्छ । जसका कारण यस तेलको धेरै पोषक तत्व तताउँदा नष्ट हुन्छ । त्यसैले यसलाई काँचो खाँदा स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ ।
सन् २०११ मा युरोपेली खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणले जैतूनको तेलका उत्पादकहरूलाई यसले अक्सिडेटिभ तनाव कम गर्न सक्छ भनी दाबी गर्न अनुमति दियो । त्यसैगरी एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ आयललाई पनि कम आगोमा तताएर खाना पकाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तर, तेल जस्तोसुकै भएपनि यसलाई सन्तुलित मात्रामा खानु राम्रो हुन्छ ।
यस कथामा पश्चिमी आहार र त्यसको खानेकुराको अनुसन्धानलाई आधार बनाइएको छ । भारतका मानिसहरू खाना पकाउन विभिन्न प्रकारका तेलहरू प्रयोग गर्छन् तोरीको तेलदेखि लिएर बदाम र अलसीको तेलसम्म ।
निष्कर्ष यो हो कि जतिसुकै तेल खानुहोस्, त्यसलाई धेरै तताउनु हुँदैन । तेललाई बारम्बार तताएर प्रयोग नगर्नुहोस् र तेलको प्रयोग थोरै गर्नुहोस् । त्यो स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुनेछ । श्रोतः बीबीसी हिन्दी